यी हुन् को-रोनाका सबैभन्दा ख-तरनाक ५ लक्षणहरु, जुन देखिना साथ तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ ! बेवास्ता नगर्नुहाेला – Sandesh Press
July 7, 2021 195
यी हुन् को-रोनाका सबैभन्दा ख-तरनाक ५ लक्षणहरु, जुन देखिना साथ तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ ! बेवास्ता नगर्नुहाेला ।को-रोना भाइरसका दोस्रो लहर बढिबरहेकाे छ साथै नयाँ भेरियन्ट सबैको लागि घा-तक सावित भइरहेको छ । डाक्टरहरुका अनुसार नयाँ भेरियन्ट संक्रामक मात्रै नभई गम्भीर खालको रहेकाे छ ।
नेपालमा गम्भीर समस्या देखिएका बिरामीहरुको भेन्टिलेटर र आइसियुमा भइरहेको छ । गम्भीर भइसकेपछि अस्पताल जाँदा धेरै विरामीहरूले ज्या-न गुमाउनु परेको डाक्टरहरूले बताउदै आएका छन् । निम्न समस्या देखिन साथ तुरुन्तै अस्पताल जानु उचित हुने सबैकाे सुझाव रहेकाे छ:-
१) छाती दुख्नु:- छातीमा हुने कुनै पनि प्रकारको दुखाइलाई वेवास्ता नगर्नुहोस् । को-भिड १९ का धेरै केसहरूमा फोक्सोको म्यूकोसल लाइनिङ्ग आक्रमण गर्दछ तसर्थ, बिरामीले छातीको यस भागमा दुखाइ र ज-ल-न महसुस गर्न थाल्छ । यदि तपाईं यस्तो समस्या महसुस गर्नुहुन्छ भने, तपाईं तुरून्त अस्पताल जानु पर्छ ।
२) ओठमा निलोपन:- धेरै मानिसहरुका ओठहरु र अनुहारमा निलोपन हुन्छ जब उनीहरु को-रोना पोजेटिभ हुन्छन् । यो शरीरमा प्रभावित अक्सिजन स्तरको संकेत हो, जसलाई चिकित्सा भाषामा हाइपोक्सिया भनिन्छ । इपोक्सियामा हाम्रो टिश्यूहरूले पर्याप्त अक्सिजन पाउँदैनन्, जसको कारण शरीर राम्रोसँग काम गर्न सक्षम छैन ।
४) बेहोस हुनु वा स्नायू प्रणालमिा समस्या:- को-भिड १९ बिरामीको स्नायू प्रणालीमा पनि प्रभाव पारेको देखिने गरेको पाइएको बताइएको छ । यसकारण बिरामीमा कन्फ्यूजन, आलस्यता, बैचनी र बेहोस हुने जस्ता समस्या हुन्छ । विज्ञका अनुसार यदि कुनै विरामीलाई सानो र सजिलो काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ वा एक वाक्य बोल्न पनि समस्या भइरहेको छ भने तुरुन्त अस्पतालमा जानु पर्छ ।
५) अक्सिजन लेभल:- को-रोना संक्रमित हुँदा यसले शरीरको अक्सिजन स्तरमा पनि नराम्रो असर पार्छ । वास्तवमा, जब को-रोना पोजेटिभ हुन्छ, तब मानव फोक्सोको एयर ब्यागमा तरल पदार्थ भरिन्छ र शरीरमा अक्सिजनको लेभल कमि हुन्छ । यदी यस्तो समस्या देखिएमा बिरामीलाई तुरुन्त अस्पतालमा भर्ना गरिनु पर्छ ।
६) सामान्य लक्षणहरू:- ज्वरो, खोकी, घाँटी दुख्नु, रुघा लाग्नु, पखाला, घाँटी दुखाइ, बहेको नाक, शरीर दुख्नु, जोर्नी दुख्नु को-रोनाको सामान्य लक्षण हो । यस्तो समस्या देखिएमा होम आइसोलेसनमा बस्न सल्लाह दिइन्छ तर यी लक्षणहरुले नै बिरामीलाई गम्भीर बनाएको अवस्थामा तपाईले चिकित्सकलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुपर्दछ।
आफ्नो स्याहार गर्ने तरिका:- स्वास्थ्य विशेषज्ञहरू भन्छन् कि यदि तपाईं संक्रमित व्यक्तिसँग ६ फिट भन्दा कमको दूरीमा १५ मिनेट जति सम्पर्कमा रहनुभयो भने तपाईं यस रोगको शिकारमा पर्न सक्नुहुन्छ । संक्रमित व्यक्तिबाट टाढा रहनुहोस् र बाहिर जानु अघि मास्क लगाउनुहोस्, र बाहिर आइसकेपछि हात राम्रोसँग सफाइ गर्ने बानि बसाल्नुहाेस् ।
Prevभुन्टीसँग बिहे गरे लगत्तै मिडियामा आए सन्तोष, खोले रियल लाइफमा उनीसँगको आफ्नो सम्बन्ध पनि, हेर्नुहोस् भिडियो
Nextसुजिता भण्डारीको पोष्टमार्टम रिपोर्ट : यो.नीको जाँच गर्दा ज.बरज.स्ती क.रणीको कुनै संकेत देखिएन
जनगणना गर्न खटिएकी यी महिला यसकारण पक्राउ परिन, कारण थाहा पाउदा छक्क पर्नु हुनेछ !
खुसीको खबर: ए’क्कासी घट्यो खानापकाउने ग्यासको मुल्य !